Update Nepal – Page 2
हुम्लामा पाँच वार्डको कोभिड अस्पताल सञ्चालन !
माधव नेपालले चुर्लुम्मै डुबाए, ओलीजीसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रियो – प्रचण्ड !
नेपालसहित विश्वलाई पुग्ने गरि अमेरिकाले खोप उत्पादन गर्नुपर्छ : सिनेटर एड मर्की !
कोभिडका बिरामी बोक्दा बोक्दै एम्बुलेन्स चालक सङ्क्रमित भए : आइसोलेशनमा बस्दा आफु नाचे आरुलाई नाचाए ! (भिडियो सहित)
रामकुमारी झाँक्री मन्त्री बन्दै, अरु को-को ?
अन्त्यमा जिते ओलीले : माओवादी र कांग्रेसले भने – ‘बहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना हरायो’ !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on अन्त्यमा जिते ओलीले : माओवादी र कांग्रेसले भने – ‘बहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना हरायो’ !
काठमाडौ -संसदमा विश्वासको मत नपाएपनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै फेरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लािग दिएको समय सकिदै गएका कारण ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेको हो । नेकपा एमालेमा बढ्दै गएको विवाद समाधान हुनेक्रममा रहनु र जसपा पनि एक ढिक्का नभएका […]
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडकमा बिरामी बोकेको गाडी रातभर हिलोमा डुबिरहयो !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडकमा बिरामी बोकेको गाडी रातभर हिलोमा डुबिरहयो !
इलाम – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक फाल्गुनन्द मार्ग हो। गृह जिल्लामा हुने कार्यक्रममा नेम्बाङ फाल्गुनन्द सडक इलामको लाइफलाइन भएको बताइरहन्छन्। नेम्बाङको अधिकांश भाषणमा फाल्गुनन्द मार्ग चाडै सम्पन्न हुने कुरा छुट्दैन्। वामपन्थी सरकारले पश्चिमी इलामबासीको समस्या हल गर्न बढेका नेम्बाङ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा बताइन्छन्। झापाबाट इलाम […]
जहाँ महन्थ ठाकुरले आफ्ना सांसद राखेका छन् !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on जहाँ महन्थ ठाकुरले आफ्ना सांसद राखेका छन् !
काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना सांसदलाई भक्तपुरको डोलेश्वर भिलेज रिसोर्टमा राखेका छन्। बिहीबार दिउँसो पार्टी कार्यालय बबरमहलबाट आफ्नो पक्षका सांसदलाई ठाकुरले भक्तपुरको रिसोर्टमा लगेका हुन्। रिसोर्टमा पुगेका एक सांसदले भने, ‘हामी भक्तपुरमा एकसाथ बसेका छौँ।’ ती सांसदले आफूहरु बसेको ठाउँ भने बताउन चाहेनन्। स्रोतका अनुसार भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ८ […]
अक्सिजनको अभाव : कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो कर्णाली प्रदेश अस्पताल !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on अक्सिजनको अभाव : कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो कर्णाली प्रदेश अस्पताल !
बिहिबार ३० बैसाख २०७८ सुर्खेत – वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल पनि कोभिड–१९ संक्रमण भएका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अक्सिजनको अभावका कारण अब आउने बिरामीहरुलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ। यद्यपि बिरामीलाई भर्ना लिन नसक्ने अवस्थाबारेमा छलफल भने गर्नुपर्ने अस्पतालका प्रमुख डा. डम्मर खड्काले बताए। ‘अहिलेसम्म त लिएका थियौं, अब […]
एम्बुलेन्स चालक राजु : घरमा सक्रंमित श्रीमतीको ख्याल गर्नुपर्ने तर दिनरात नभनी विरामी बोक्छन् !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on एम्बुलेन्स चालक राजु : घरमा सक्रंमित श्रीमतीको ख्याल गर्नुपर्ने तर दिनरात नभनी विरामी बोक्छन् !
यति बेला देशभर को*रानाको दोस्रो लहर ब’ढेसगै नेपालामा पनि नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा गरेको छ।यसै बिचमा देशका विभिन्न जनप्रतिनिधिहरुले आफू चड्ने सवारीसाधन र आफू बस्ने घरलाई को’रोना स’ङक्रमितलाई ब’चाउन प्रयोग गरेका छ्न। उनिहरुले आ’इसोलेशन बनाउन र बि’रामी बोक्न प्रयोग गरेका हुन । यसै बिचमा लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर र उप मेयरले चढने सवारीसाधन […]
कसैबाट १ रुपै सहयोग नलिइ : संक्रमितको घरघरमा पुगेर सेवा गर्ने नर्स नितु !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on कसैबाट १ रुपै सहयोग नलिइ : संक्रमितको घरघरमा पुगेर सेवा गर्ने नर्स नितु !
सं’कटको घडीमा मानव जातिको परीक्षा हुन्छ । भनिन्छ यु”द्धको बेलामा भाग्ने सिपाहीको कुनै काम हुँदैन । सिपाहीको पनि युद्ध’मा मात्रै परीक्षा हुन्छ । नर्सिङ पढाइ प‘रा गरेकी बाग्लुङकी २८ वर्षीया नितु खड्का यतिखेर आफ्नो पेशागत क्षमताको परीक्षामा ख’रो उत्रिएकी छन् । कोरोना भाइरस फैलिनुअघि उनी स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्यक्ष पहुँचबाट वञ्चित रहेका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको सेवा […]
जापान लगाएत विभिन्न देशले लगाए नेपालीलाई प्रवेशमा रोक !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on जापान लगाएत विभिन्न देशले लगाए नेपालीलाई प्रवेशमा रोक !
सीता शर्मा, काठमाडौँ – नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, जापानलगायतका देशले तत्काल नेपालसहित चार देशका नागरिक प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।नेपालमा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमण उच्च जोखिममा रहेको भन्दै नेपालसहित बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका नागरिकलाई ती देशमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका हुन् । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि प्रवेशमा रोक […]
अक्सिजनको स्तर बढाउन र फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न खानुहोस् यी खानेकुरा !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on अक्सिजनको स्तर बढाउन र फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न खानुहोस् यी खानेकुरा !
काठमाडौँ – शरीर स्वस्थ रहन फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्न आवश्यक छ। फोक्सोले फिल्टर गरेपछि मात्र अक्सिजन शरीरको प्रत्येक भागमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा फोक्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि फोक्सोले राम्ररी काम कार्य गरेन भने दम, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, क्षयरोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, कोरोनाभाइरस महामारीबाट बच्नको लागि फोक्सोलाई स्वस्थ […]
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रक्षेपण : कोरोनाबाट भदौ १६ सम्म ४२ हजार नेपालीको मृत्यु हुन सक्ने !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रक्षेपण : कोरोनाबाट भदौ १६ सम्म ४२ हजार नेपालीको मृत्यु हुन सक्ने !
काठमाडौं – कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालमा संक्रमित र मृ’त्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएका बेला भदौ १६ सम्म ४२ हजार जनाको ज्या’न जान सक्ने प्रक्षेपण एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छ। अमेरिकाको वासिङ्टन विश्वविद्यालयमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र ‘इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभालुएसन (आइएचएमई) ले म’हामारीको विभिन्न नतिजाका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको […]
नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको बेला यसरी बन्न सक्छन् देउवा प्रधानमन्त्री !
May 13, 2021 adminLeaveaComment on नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको बेला यसरी बन्न सक्छन् देउवा प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा विशेष अधिवेशनअन्तर्गत मतदान प्रक्रियामा विश्वासको मत गुमाऐसँगै कांग्रेस–माओवादीलगायत दल नयाँ सरकार गठनको तीव्र दौडधूपमा छन्। नयाँ सरकारका लागि बहुमत पु(याउन विपक्षी दललाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दललाई ‘बहुमत […]